Boqor Buurmadow ma ka tanaasulay qaddiyaddii Somaliland | Biyoguurenews.com
Home Wararka Boqor Buurmadow ma ka tanaasulay qaddiyaddii Somaliland
Boqor Cismaan Aw-Maxamuud Maxamed, oo ku magac dheer, Boqor Buurmadoow, waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Somaliland. 14 kii November ee sanadkaan ayuu yimid magaalada Muqdisho. Wareysi uu siiyay BBC Soomaali waxa uu ku sheegay inuu u yimid heshiisiinta siyaasiyiinta reer Wuqooyiga ee jooga Muqdisho.
Intii uu joogay Muqdisho waxa uu ka qayb galay munaasabado beeleedyo dhawr ah, oo uu ka jeediyay khudbado uu uga hadlay wada dhalashada iyo Soomaalinnimada.
Boqor Buurmadoow iyo Somaliland
Boqor Buurmadoow waxa uu dhawr jeer ka hor yimid talaabooyin ay qaaday Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland, waxaana ka mid ahaa go’aankii Somaliland ku soo musaafurisay qoysas ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo deganaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Buurmadoow oo ka hadlayay munaasabad uu ku raali galinayay dadkaas, oo ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa sheegay in uu lacag dhan boqol kun oo Doolar oo raali galin ah ku wareejiyay dadkii la soo barakiciyay.
Boqor Buurmadoow ayaa yiri : “Dadkii walaalahayaga ahaa ee dhibaatadu ku dhacday ee gobolada Somaliland daganaa, ee naga midka ahaa ee sida aan habooneyn loo soo tarxiilay, in aan ka daba nimaano oo raali galino, oo aan ogaano sida xaaldadoodu tahay ayaan u nimid”
Dad badan ayaa su’aalo iska weydiinaya in Boqor Buurmadoow oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland uu yimaado magaalada Muqdisho, isaga oo ka shaqeynaya arimo siyaasadeed. Dib ugu noqoshadiiisa Hargeysa ayaa ka mid ah waxyaabaha sida wayn la isku weydiinayo.
Mar BBC du wax ka weydiisay in ay u qorsheysan tahay in uu dib ugu noqdo Hargeysa ayuu yiri: “Wax danbi ah ma aanan galin. Wax siyaasad ahna kama qayb qaadan. Si fiican oo wanaagsan oo aad arki doontaan baa la iisoo dhaweyn doonaa, oo aan uga dagi doonaa, wax cafis ahna ma qaadanayo, sabab aan u qaatana ma jirto”.
Isagoo ka hadlayay gooni isu taaga Somaliland ayaa waxa uu yiri, ” madax dhaqameedku haddaan nahay ma goyno mowqifka siyaasiga ah. Siyaasiin ayaanu leenahay. Shacabka ayaanu racanaa anaga. Shacabkeygu wuu aaminsan yahay, aniguna waan aaminsannahay waxa shacabkeygu uu aaminsan yahay.”
Somaliland horey ayay u xirtay Boqor Buurmadoow
Maxkamadda gobolka Hargeysa ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa sanadkii 2018 ku xukuntay shan sano oo xabsi ah, balse markii dambe racfaan uu ka qaatay xukunka waxaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah. Muddo laba bil ah oo uu xirnaa kadib, waxaa lagu soo daayay cafis madaxweyne.
Sababta loo xiray Buurmadoow ayaa ahayd in uu degmada Carmo ee gobolka Nugaal uga qayb galay, munaasabad lagu celeema saarayay Beeldaajaha deegaankaas.
Sidoo kale sanadkii 2012 ayaa ciidamada booliska ee Somaliland waxay Buurmadoow ka qabteen gegida diyaaradaha ee magaalada Hergeysa, isaga oo ka yimid Imaaraadka Carabta.
Previous articleXukumada S/land oo shaacisay Qorshe lagu xakamaynayo Baraha Bulshada
Next articleWefti Safiiro ah oo soo gaadhay Hargeisa